Malezia: Taratasy Fitarainana Hanoherana Ny Filohan’ny Vaomiera Misahana Ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2018 15:52 GMT
Nampakarin'ilay mpisera amin'ny YouTube Sophiemiller ilay lahatsarin'ny fifandonana sy ny mety hisamborana ilay mpikatroka mafana fo ao amin'ny antoko mpanohitra Maleziana ,Tian Chua. Chua no lehiben'ny filazàmbaovaon'ny Antoko Keadilan Rakyat. Voasambotra tamin'ny fotoana niezahany hiditra hametraka taratasy fitarainana tao amin'ny parlemanta i Chua.
Manohitra ny fikasan'ny governemanta hanova ny lalàm-panorenana ka mamela ilay filoha am-perinasan'ny vaomiera misahana ny fifidianana hanohy ny asany aorian'ny taona fisotroan-drononony ilay taratasy fitarainana. Tsy manohitra ny fampitomboana ny taona handehanana misotro ronono akory ny antoko mpanohitra saingy mahatsapa izy ireo fa mitanila amin'ny antoko eo amin'ny fitondràna i Abdul Rashid, filoha amperinasan'ny vaomiera misahana ny fifidianana.
Soratan'i Khoo Kay Peng ny momba ny fanehoankevitra vao haingana nataon'i Abdul Rashid ho fanohanana ny governemanta.
Ny fomba fijerin'ny filohan'ny Vaomiera misahana ny fifidianana (EC) Abdul Rashid Abdul Rahman, momba ny ‘fitondrana’ izay heveriny fa afaka mitantana ny firenena, dia tahaka ny olona iray izay tena te-hidera fitondrana iray manokana. Ahoana no hahafahan'ny mpitsara ny fifidianana hitsara marina sy tsy momba ny atsy na ny aroa raha toa ka mazava sy mibaribary ny fitanilàny ?
“Maro ny olona mitaintaina ny hamaritra ny karazana fitondràna izay hitondra an'i Malezia amin'ireo taona ho avy. Matetika miresaka ny momba ny fitondrana ry zareo. Tsy mbola niresaka momba ny fitondrana mihitsy aho. Tsy misy afa-tsy fitondràna iray monja eto amin'ity firenena ity izay afaka mitondra (ny firenena),” hoy izy.
“Tezitra amiko ny olona isaky ny miteny izany aho (nefa) toa tsy takany ny fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena. Ary koa iza no afaka (handray an-tànana) ny anio raha izao no rafitra politika iainantsika amin'izao fotoana izao ,” hoy izy.
Tsy mahagaga raha hifanolànana sy mampiahiahy ilay hetsika fanavaozana ny lalàm-panorenana mba hamelàna an'i Abdul Rashid ho afaka mitondra mandritry ny herintaona fanampiny indray. Tsy maintsy manaja ny lalàna sy tokony hanaja ny taona handehanana misotro ronono i Abdul Rashid, tahaka ny hafa rehetra.
‘Ndeha hiverenana ny fisamborana an'i Chua, anontanian'ny mpitoraka bilaogy M-Factor ny fomba nampiasain'ny mpitandro filaminana
Zon'ny mpitandro filaminana ve ny misambotra an'i Tian Chua araka ny fomba nasehon'ilay lahatsary ? Inona ny hadisoany ka nahatonga ny fisamborana azy tahaka izany ? Heveriko fa mihoatra ny fefy ny mpitandro filaminana no sady nanomboka ady amin'ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana.
Araka ny fahitàna ilay lahatsary, dia tsy nanao na inona na inona i Tian Chua, fa nipetraka tao anaty fiara nentin'ny mpamiliny na ny namany, ary tsy nanao afa-tsy ny nizotra ho any amin'ny tranon'ny Parlemanta. Mendrika fisamborana ve izany ? Misy lalàna ve mandrara ny fidiran'ny mpanao politika ao amin'ny tranon'ny parlemanta ?
Ilay mpitoraka bilaogy ao amin'ny obscure-thoughts, na izany aza, dia nilaza fa nirian'i Tian Chua ny fisamborina sy ny dokam-barotra miaraka aminy.
Mpanohitra manan-kaja maro hafa ihany koa no nosamborina araka ny hitan'ny Parlemantera Maleziana Lim Kit Siang.
Vavolombelona nanatri-maso ny fisamboran'ny mpitandro filaminana an'i Mustapha, Yap Swee Seng, Wong Chin Huat ary i Gayathry tao anatin'ny faritry ny Parlemanta aho. Raha ny marina, niaraka tamin'i Yap, Wong ary Gayathry teo ivelan'ny Parlemanta aho tamin'ny fotoana nanararaotan'ny mpitandro filaminana nampiasana ny fahefany hanatanterahana ny fisamborana tao anatin'ny faritry ny parlemanta nandritra ny fisakafoanana antoandro.
Mampiseho lahatsary iray hafa amin'ny YouTube izay ahitàna mpitandro filaminana mitazona solombavambahoaka mpanohitra taloha ( tsy misy didy avy any amin'ny fitsaràna) eo ivelan'ny parlemanta Maleziana i Lim Kit Siang.
Taty aoriana, navotsotry ny mpitandro filaminana ireo olona voasambotra.
17 ora izayKambodza